China Plastic Pulverizer 55kw Motor Kit rụpụta na Factory | Xinrui
Plastic pulverizers na-na-na na na na Chinese ọkọlọtọ na e mere maka egwe ọka plastic nchara, nkechi osisi, gburugburu ebe obibi osisi, n'akuku akara, nkume plastic aka uwe waya, profaịlụ, wallboard, ọjà, XPS, ụlọ template, ịfụfụ osisi, SPC, WPC n'ala, resin taịl. were gabazie.
Isi ihe: alloy steel, steel steel, iron
Adabara plastic ígwè, nkechi osisi, obibi obibi, n'akuku akara, nkume plastic aka uwe waya, profaịlụ, wallboard, anwụrụ, XPS, ụlọ template, -fụfụ osisi, SPC, WPC n'ala, resin tile
Star-Delta na-ebute ụlọ ọrụ eletriki
ike magnetik feeder 250W
Nhicha na nhichapụ ihe
Ikuku ikuku-ike 7.5W
Powdergbọ njem ntụ ntụ
igwe anaghị agba nchara jụrụ anwụrụ
Vetụgharị na obi jụrụ
DIA 1000mm gbaa gburugburu ihuenyo
Gbanyụọ fan 1.1KW
Pulse ájá ma ọ bụ akpa nyo mwepụ
55KW igwe eletrik
NOlọ ọrụ NO.
NOkpụrụ Ọ dịghị.
Principlekpụrụ ọrụ na njirimara
Nke a plastic pulverizer eji ikwu mmeghari n'etiti ibughari nha nha diski na ofu nha nha diski ka ihe na-echi ọnụ n'ala site mmetụta nke eze diski, esemokwu na mmetụta dị n'etiti ihe. A na-ebuba ihe ndị a na-etipịa n'ime mmiri ahụ site na usoro nke njem ụgbọ elu na-adịghị mma, a na-ewepụtakwa uzuzu site na igbe nchịkọta uzuzu site na akpa akwa.
A na-egweri ihe na-agba ọsọ ọsọ mgbe etichara efere ezé ma wepụta ya site na mmịpụta, ebe akụkụ buru ibu na-aga n'ihu na-emetụta ma na-amịpụta mgbe ọ gwechara. N'ụzọ dị otú a, a na-ebelata ibu ahụ, arụmọrụ na-egweri ihe ka mma, a na-ejikwa ntụ ntụ na-eme ka ọ dị mma.
Large ịkwanyere super mma-egweri igwe bụ ihe kasị ọhụrụ ụdị egweri igwe mepụtara site anyị ụlọ ọrụ site na-adọrọ elu German technology. Njirimara ya dị ka ndị a:
1. Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere otu ụdị igwe nri, enwere ike ịpụta ike nke otu ike ahụ ma nwee ike ịchekwa ike ike.
2. removaljá mwepụ ngwaọrụ agbakwunyere n'ụzọ dị irè belata ájá mmetọ.
3.tho fan si ihe, vibrating ihuenyo nhọrọ, nhọrọ nke erughị eru ihe onwunwe, akpaka azụ egweri igwe iji belata ọrụ ike nke ndị ọrụ.
4. Enwere ike ịmeghe ọnụ ụzọ nke igwe ndị ọbịa
ikwado mmezi na ngwá ọrụ nnọchi.
5. Jiri geomantic okpukpu abụọ oyi, mma belata na-arụ ọrụ okpomọkụ ebe n'ime airframe egweri eme bụghị mfe nke udi.
1. Imewe kọmpat Ọdịdị, obere size, ala ike oriri, elu mmepụta.
2. Mfe ọrụ nke mma na ofu mma nwechapụ na
ntuziaka ntuziaka, mfe ịchịkwa size nke gbawara n'etiti.
3. Ngwaọrụ dị mfe iji dochie anya, mma nwere ike ịmegharị ugboro ugboro.
4. The isi engine na-onwem na ikuku na mmiri mgbasa jụrụ usoro.
Uru nke ntaneti ihe ntanye
Na usoro nke mgbochi corrosion na mgbochi corrosion ọgwụgwọ, pụrụ iche imewe na nakweere iji zere leakage ihe onwunwe. Nhazi nke ngwaọrụ na-ewepụta ihe na-eme ka ọ dị mfe maka onye ọrụ dị ọcha.
Nke gara aga: Modelkpụrụ Pulverizer Model 80
Osote: Imefusị Plastic pulverizer 75kw Motor Kit